Global Aawaj | बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १९ वर्षिया भागरथीको न्यायको लागि दाङ्गका युवाहरु सडकमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १९ वर्षिया भागरथीको न्यायको लागि दाङ्गका युवाहरु सडकमा
बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १९ वर्षिया भागरथीको न्यायको लागि दाङ्गका युवाहरु सडकमा
३० माघ २०७७ 8:39 pm
दाङ । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बैतडी भागरथी भट्टको न्यायका लागि दाङमा युवाहरु सडक उत्रिएका छन् । विहीवार दाङको तुलसीपुरमा विरोध प्रर्दशन गरेका छन् । उनीहरुले निधारमा कालो कालो पट्टी बाधेर विरोध प्रर्दशन गरेका थिए । उनीहरुले भागरथीको परिवारलाई न्याय र अपराधि पत्ता लगाइ कडा भन्दा कडा कारबाहीको माग गरेका थिए । घटना घटेको यतिका दिन हुदाँ समेत अपराधि पत्ता नलाग्नुमा सरकारले नै ध्यान नदिएको भन्दै उनीहरु आक्रोस ब्यक्त गरेका थिए । विपी चोकबाट शुरु भएको विरोध प्रर्दशन बजारका विभिन्न भागमा परिक्रमण गरी विपीचोकमा कोणसभामा परिणत भएको थियो ।
कोणसभामा बोल्दै युवा अविशेष भण्डारीले दैनिक कम्तिमा ६ वटा बलात्कारका घटनाहरु घटिरहेको भन्दै सरकारले ध्यान नदिएको आरोप लगाए । उनले सरकारमा रहेका मान्छेहरु आफ्नो कुर्सी जोगाउन मात्र ध्यान दिएको र देशमा दैनिक रुपमा भइरहेको बलात्कारका घटना प्रति सरकारले चासो नदिएको समेत आरोप लगाए । ‘निर्मला पन्तको हत्या भएको २ बर्ष ५ महिना भयो,’ उनले भने,‘ पिडित परिवारले न्याय पाउनु त कुरै छाडौँ । अहिले सम्म यो सरकारले हत्यारा पत्ता लगाउन सकेको छैन् । अब के भागरथीले न्याय पाउँलीन र ? ’ उनले बलात्कार गर्नहरुले कडा कारबाही नपाएका कारण यसलाई त्यस्ता अपराधिहरुले संस्कृतिको रुपमा लिएको भन्दै यस्ता घटनाहरु रोक्नको लागि राज्यले बलात्कारीलाई फासीको सजाय दिने कानुन ल्याउनु पर्ने माग गरे ।
त्यस्तै, अर्का युवा झग्गु भण्डारीले आफुहरु जस्ता युवाहरुले कडा भन्दा कडा कारबाहीको माग गर्दै आइरहेको भएता पनि सरकारले नसुने झैँ गर्दै आइरहेको बताए । उनले अहिले पनि हामी युवाहरु अपराधिलाई कारबाही र पिडित परिवारलाई न्याय होस् भन्दै सडकमा आइरहेको अवस्था सरकारमा बस्ने मान्छेहरुले काम नपाएका भन्ने गरेको उनले बताए । त्यसैगरी उनले राज्यबाट अब केहि पनि सहयोग नहुने भएकाले युवाहरु अब आफै सचेत हुनु पर्ने अवस्था आएको समेत बताए ।
सामना पौडेलले देशका दैनिकहरु बलात्कारका घटनाहरु घटिरहेको अवस्थामा सरकारले ध्यान नदिएको आरोप लगाइन् । उनले नेपालमा दैनिकहरु यस्ता घटनाहरु घटि रहदाँ विदेशम गएका नेपाली चेलिहरुको अवस्था कस्तो होला भन्दै राज्यले ध्यान दिनु पर्ने बताइन् । ‘ अहिले म आफै सुरक्षित छैन्,’ उनले भनिन्,‘ म कलेज जादाँ झोलामा खुकुरी बोकेर जानु पर्ने अवस्था आयो । मैले झोलामा किताब बोक्ने हो की खुकुरी ? खोइ राज्यले हामीले सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको ।’